Last nohavaozina: Sep. 14 2019 | 2 min namaky
Na izany avy amin'ny namana, ray aman-dreny, mamoafady, na Hollywood, isika rehetra manana vaovao tsy marina eo amin'ny lohany momba ny firaisana ara-nofo. Soa ihany, Tonga eto isika mba hanampy decipher sasany mampihomehy indrindra angano.
Hevi-diso #1: Afaka milaza ny fomba lehilahy lehibe ny filahiana dia avy ny kirarony haben'ny, fa toy ny hoe mandeha “raha manana tongotra lehibe…”. Izany no diso. Tsy misy fifandraisany eo amin'ny filahiana tsy habe sy kiraro haben'ny. Izany koa ny tanana mandeha habe sy sofina haben'ny.
Hevi-diso #2: Ny lehibe kokoa ny filahiana, ny fahafaham-po kokoa ny vehivavy dia hahazo. Diso, habe raha ny marina dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahafinaretana ny habetsahan'ny, izany fotsiny ny ankamaroany misy ifandraisany amin 'ny olona ny hambom-pon'ny tena. Ny G-Spot no misy ao anatin'ny roa santimetatra ny fivaviana, ary izany dia ny lohan'ny filahiana izay mahatonga izany raha lavinareo. Raha ny tena izy, filahiana lehibe kokoa fanaony matetika ny G-Spot tanteraka. Izany amin'ny foto-pisainana, habe midina ho tiany tsy ho afa-po.
Hevi-diso #3: Tsy azo heverina ny vehivavy ny mitoe-jaza raha izy efa bevohoka. Diso, antsoina hoe superfetation, ny vehivavy raha ny marina dia afaka hitoe-jaza raha bevohoka na dia tena tsy fahita firy.
Hevi-diso #4: Ny fanambadiana dia hanimba ny firaisana ara-nofo ny fiainana. Izany no diso. Firaisana ara-nofo, raha ny tena izy, Manatsara aorian'ny fanambadiana. Asehon'ny fanadihadiana natao vao haingana fa ambony kokoa ny mpivady manana afa-po, hiezaka bebe kokoa toerana samihafa, ary manana firaisana ara-nofo matetika.
Hevi-diso #5: Ny vehivavy dia tsy mijery sary vetaveta. Eritrereto indray. Na dia maro no tsy mety miaiky izany, be dia be ny vehivavy mijery sary vetaveta. Nandritra ny fikarohana vao haingana, 85% Niaiky ny vehivavy rehefa nijery sary vetaveta. Ka toa ny vehivavy mijery fotsiny toy ny olona.
Hevi-diso #6: Dia tsy hahazo bevohoka raha manao firaisana amin'ny dobo na mafana tub. Fandinihana voaporofo fa hoe ao amin'ny mafana tub mahery 30 minitra afaka hampidina vardenafil; na izany aza, misy na inona na inona eo amin'ny rano ny hafanana na simika na toetra izay hamono eny tsirinaina. Raha vao miditra ny tsirinaina ny fivaviana, ny tanjona dia ny hitady ny atody ny zezika, na inona na inona hanakana izany.
Hevi-diso #7: Ny olona antitra dia tsy manana firaisana ara-nofo. Na aretina, fahafatesan'ny vady, voka-dratsin'ny fanafody eo antony hafa dia mety ho lasa ny sakana, Tsy mitsahatra taona firaisana ara-nofo. Firaisana ara-nofo dia mandrakizay-lava ny olombelona lafiny toe-javatra izay tsy miankina amin'ny taona, endrika ara-batana, fahasalamana, na ny asany fahafahana. Raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny olona manao firaisana tsara hijanona ho antitra. Ankoatra izany, firaisana ara-nofo tsy tapaka tao amin'ny zokiolona tena manampy ara-tsaina sy ara-batana.
Inona no hanaovana amin'ny A Voalohany Date By Zodiaka Sign